Indlu yefandesi yaseBreker ifumana i-132.000 yeedola kwi-Apple I | Ndisuka mac
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukusuka kwindlu yefandesi ngokwayo, bayachukumiseka kancinci emva kwexabiso elifunyenwe kule khompyuter inomtsalane ye-Apple, apho bambalwa kakhulu abasebenzayo namhlanje. Ngapha koko, le ndlu yentengiso ithengise iqela lala maqela kwaye malunga neminyaka emi-4 eyadlulayo elinye iqela elinempawu ezifanayo lafikelela kuma-246.000 euros, inani elibaluleke ngakumbi kodwa elikwakude nakwimali enkulu efunyenwe lelinye lala 'maqhekeza' Imbali ye-Apple eyenziwe nguSteve Jobs kunye noSteve Wozniak, eyafunyanwa elona xabiso liphezulu lihlawulwe kwifandesi $ 671.000.
Kuyo nayiphi na imeko ifandesi ye le khomputha yokuqala eyenziwe ngu-Apple kwi-70s emva kwexesha Ayizuzanga isixa esisezantsi kangako ukuba sithathela ingqalelo ixabiso lokuthengisa lala maqela ngaloo minyaka, umba kukuba ngoku ezi Apple ndiyinto yomqokeleli oyinyani kwaye kuyamangalisa ukuba ibingathengiswa ngenani eliphezulu kakhulu.
Ifandesi ephele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo yongeze esi sixhobo se-Apple kunye nesiqinisekiso sayo sobunyani, incwadi yemiyalelo eyongezwe ngu-Apple kuzo kunye namanye amaxwebhu ayintsusa anokuphakamisa ixabiso le-Apple I kumanani amangalisayo, kodwa ngeli xesha khange ndibenjalo kwaye ugcine i-110.000 ye-euro. Ngokweengxelo ezimalunga nefandesi Uwe Breker, intloko yendlu yefandesi, Ifandesi yala maqela "ibisemgangathweni" kwaye ngenxa yesi sizathu khange bakwazi ukufikelela kumanani ezihlandlo zangaphambili nangona bebeliqela lembali kwinkampani yaseCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Indlu yefandesi yaseBreker inyusa i-132.000 yeedola kwi-Apple I
Ingqondo yemveliso enkulu elandelayo ye-Apple yeMac, iSpin